Donate a Mota - BullyingCanada
kupa vana vanoshungurudzwa
inoda rutsigiro rwako Tsigira Basa Redu Rakakosha Rupo Rwako Runoponesa Upenyu Batanidzwa Unogona Kubatsira BullyingCanada anovimba nevane rupo
rutsigiro rwevanhu vakaita sewe.
Titsigirei. Ponesai Upenyu.
Tsigiro yedu yakakosha inogoneswa nevanopa sewe.
Makumi ezviuru zvepwere munyika yose anovimba nazvo BullyingCanada kuti vavabatsire kuwanazve kuchengeteka kubva kune vanodheerera munharaunda dzinenge dzose.
24/7 nyika yese inotsigira network yevechidiki vanodheererwa.
Misangano yenharaunda inogadzira pfungwa dzakavhurika uye inodzivirira vana.
Scholarship inosimbisa vechidiki kuti vave vatungamiriri venharaunda.
Kutsigira vasinganeti kune vanodheererwa nevechiduku.
tibatsirei pakudanidzira kwokutambudzika
inochemera rubatsiro muna 2020 kuburikidza nefoni uye mameseji
inochemera rubatsiro muna 2020 kuburikidza ne live chat uye email
vashanyi ku BullyingCanada.ca muna 2020
Unogona kushandura mota yako isingadikanwi kuita mupiro werupo kutsigira Bullying Canada! Uchishanda wakamiririra isu, Donate Mota Canada inotambira mota yako yekupihwa - kumhanya, kana kwete. Chekare kana chitsva!
Iko hakuna muripo kwauri, uye maitiro acho ari nyore kwazvo! Ipa Mota Canada inofambisa ese maficha ekupa mota yako kubva pakutora kusvika pakutengesa kwekupedzisira, kuve nechokwadi chekuti mota yako inotengeswa kune yakanyanya kutengesa mhedzisiro. Vanobva vatitumira mari kuBullying Canada, uye tinokutumira risiti yemutero yeukoshi hwemotokari. Bvisa mota yausingadiwe nhasi!
Dzimwe Nzira Dzokutsigira BullyingCanada
Pamusoro pekupa online, kune nzira dzakati wandei dzekutsigira basa redu rinoponesa hupenyu.
Tinotenda vatsigiri vedu vanokoshesa, vane rupo!
Kudyidzana kwemakambani kunogona kubatsira zvese BullyingCanada uye bhizinesi rako!
Zvipo zvikuru zvinopa simba BullyingCanada kuita zvakawanda!
Mota dzisingadiwe dzinoshanduka kuita rutsigiro rwerupo!
Siya nhaka isingakanganwiki uye tsigira vechidiki kuzvizvarwa zvichauya!
Wana Rubatsiro Iye Zvino—Hausi Woga
24/7/365 rutsigiro kuburikidza nerunhare, mameseji, chat, kana email
Wana Rubatsiro Zvino
Uri kushungurudzwa here?
Tinogona kuvimba nerutsigiro rwenyu here?